लक्ष्मी स्मृति पुरस्कारबाट उपकुलपति गुरुङ पुरस्कृत – Todaypokhara
लक्ष्मी सिग्देल स्मृति पुरस्कारबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
पृथ्वीधर सिग्देल समाजले संचालन गर्दै आएको सो पुरस्कार स्व. लक्ष्मी सिग्देलका परिवारले स्थापना गरेका हुन्। पुरस्कारका लागि छोरा शरदकान्त सिग्देल र छोरी शारदा पराजुली सिग्देलले दुई लाख रुपैयाको अक्षयकोष स्थापना गरेका थिए । पुरस्कार संस्थापक शरदकान्त सिग्देलले अक्षयकोष रकम बढाएर तीन लाख पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले थोरै व्यत्तिको जन्म कुल, खान्दान, देश र महादेशको इज्जतका लागि हुने बताए । उनले बिद्वान बन्नु ठूलो कुरा नभएको भन्दै विद्वताबाट ज्ञानशील र कर्मशील बन्नु ठूलो कुरा भएको उल्लेख गरे । पुरस्कृत व्यत्तित्व नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङले आफु गैर राजनैतिक व्यत्ति भएको भन्दै राजनैतिक व्यत्तिका रुपमा नहेर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा शिक्षाविद् जर्ज जोन, व्यत्तित्व छनोट समितिका संयोजक प्रा.तारा बराल र नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले बोलेका थिए ।
विदेशीसँग लिभिङ टुगेदर, ‘पार्सल आयो’ भन्दै ठगी
नवौ पोखरा महोत्सवमा कडा सुरक्षा ब्यवस्था